MUUQAAL: Madaxwayne Farmaajo oo Ka hadlay Dagaaladii Sokeeye ee dalka iyo Qorshaha Xukuumada Cusub - Hablaha Media Network
MUUQAAL: Madaxwayne Farmaajo oo Ka hadlay Dagaaladii Sokeeye ee dalka iyo Qorshaha Xukuumada Cusub
HMN:-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C.laahi Farmaajo ayaa ka hadlay ayaa Baarlamaanka Soomaaliya uga Mahad celiyey Sida ay Codka u siiyeen Raysal wasaare Khayre. “Waxaan idiinka mahadcelinaya Baarlamaanka sida aqlabiyada leh ee aad codka kalsoonida u siiseen Ra’isalwasaare Kheyre, Waxayna muujinaysaa in Midnimadii Soomaaliya Bilaabatay.”
Wuxuu ka Hadlay Qorshaha ay ku shaqayn doonto Xukuumada uu Hogaamiyo “Dowladaydu sidaan idiin sheegay waa nabad iyo dib u heshiisiin, Dadka Soomaaliyeed geed walbo iyo geed gaabanba waa ugelayna isu keenidooda sida walalaheen Somaliland.”
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidookale ka hadlay Caqabadaha hor yaala Dawlada “Qolada dhibka nagu haysa hadii aan midowno oo heshiino is kaashano , alshabaab hal lug bay ku taagantahay lugtaasina waa u bixinayna . kuwaa la khalday ee caruurteena feker khaldan qaadateen soo noqda walalahiin usoo noqda waalidkiin u soo noqda”.
HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA MADAXWAYNE FARMAAJO
Sidoo kale wuxuu Madaxweyne Farmaajo ka hadlay Dhibaatooyinkii Hore ee dhacay, Wuxuuna sheegay inaysan Soomaaliya dib ugu Noqon doonin ee Horay loo socon doono. “Dhibkii dhacay qaxii dhacay, isdilkii dhacay , diintii islaamka oo la xumeeyay, waxaan kaga soo gudubnay 26sano , hada waxaan u dhaqaaqeyna dhinaca dimuqraadiyada , dadku simanyahay , hadii minority yahayna xisbi buu minority ku yahay qabiil kuma ahan”.